RAP & Religion — njem Lee - Official Site
N'ihi na dị ka ogologo oge dị ka m nwere ike icheta, Hip iwuli elu nwere ibu na Chineke na okpukpe. M na-apụtaghị na-atụ aro na niile rappers bụ okpukpe devotees. Ma ole na ole rappers - ma ọ bụ ihe ọ bụla artists n'ihi na okwu - ike ịma jijiji agụụ na-agụnye Chineke ebe na ha art. Ọ bụ eke na mma ka anyị na-ekwu okwu banyere Chineke, ma, ajụjụ bụ, Olee ihe anyị si? Ụfọdụ ga-asị, "Ọ bụ naanị music. -Adịghị-ya kpọrọ ihe!” Ma ihe a rapper na-ekwu na Maị bụ karịrị egwuregwu i nwere ike iche.
Ụfọdụ ji Hip iwuli elu iji gosi na ha ji ezi obi na nkwenkwe okpukpe ma ọ bụ enweghị ya. Islam, The ise Percenters, Christianity, Agnosticism, ekweghị na Chineke, na okpukpe ndị ọzọ niile e-akwalite site na nkà n'ụdị. M na-eche Hip iwuli elu bụ iche ruru eru na-egosipụta iguzosi ike n'ihe na nraranye na-ihe ọ bụla anyị na-omiiko banyere. Nwere obere n'ihi na omenala si dị mkpa ido rawness na emezughị n'ihi na Hip iwuli elu na-enye ohere maka ndị ọzọ okwu, otú ị pụrụ n'ezie "akụziri.”
Ma ọtụtụ mgbe Hip iwuli elu bụ ihe dị ka a barbershop karịa a Sunday School na klas. Rappers elezighị ọsọ n'ọnụ, ma ha maara ihe ha na-ekwu okwu banyere ma ọ bụ.
ezi obi vs. akpachapụghị anya
E nwere ụfọdụ onye Rhymes egosipụta a ji ezi obi na - ezie na mgbe ụfọdụ hiere - search maka na ọgụ na mgba eziokwu. M na-asọpụrụ na. Otu na-eche nke The Roots ' "Ezigbo Chineke 2.0,” ma ọ bụ Kendrick Lamar si "anwụ n'akpịrị ịkpọ nkụ”.” *Ọbụna mgbe m na-ekwekọrịtaghị na ha echiche ma ọ bụ nkwubi, M na-enwe na-ege ntị ji ezi obi na wanderings. Na ọ na-akpali m ekpe ekpere maka ibe m emcees.
Hip iwuli elu ka mgbe niile nwere a darker n'akụkụ ezie na, ebe artists emeso Chineke na okpukpe enweghị nkwanye ùgwù na enweghị nsọpụrụ. Rappers yiri ka ihe ọ bụla okwu na-eche ihe ziri ezi na oge - ma na ha n'ezie kwere ha ma ọ bụ. Na na a "post-Christian” mba dị ka nke anyị, ndị a aghara ẹma ẹsịn-na-emekarị iji na Jizọs na Ya ụka.
N'ezie, e nwere ihe ụfọdụ - dị ka omume ihu abụọ na akpịrị ego "ndị nkwusa” - E kwesịrị ga-akwa emo. ma na mwute, Bible, chọọchị, na Chineke n'onwe Ya na-emekarị emeso dị ka adịghị mkpa a na a akụkọ ifo akụkọ. m na-ekweta, -anụ rappers ekwu okwu banyere "freaky” ụmụ agbọghọ na chọọchị ekwe ukwe-eme ka m atụ egwu, ma ọ dịghị ihe ofụhọ m karịa lụtara Jizọs n'onwe Ya.
Ọtụtụ rappers akpọwo onwe ha Chineke, do onwe-ha on a larịị na Jesus, ma boastfully e Onyenwe aha n'efu. Ha na-ewu dum albums gburugburu asọpụrụghị okpukpe themes. Ha na-eji Chineke nyere ha creativity ịkparị Onye kere ha. Lee ihe megidere onwe.
Dị ka onye na-eso ụzọ Jizọs, M na ya onwe emejọọ ihe m na-anụ, Ma nke ka nke m na-atụ egwu maka ndị na-spew ndị a ikwulu Chineke okwu. Anyị niile ga-atụ egwu n'ihi na onye gaara gbụsara ọnụ mmiri na ihu nke ndị President, ma anyị kwesịrị-ọbụna ihe na-atụ egwu n'ihi na onye spits na ihu nke Chineke Pụrụ Ime.
-Aza Na Grace
Ya mere, olee otú m ga-azaghachi? M nwere ike na-amalite a mkpọsa boycott ha music. ma ọ bụ, dị ka a rapper onwe m, M nwere ike ide a Scathing diss ndekọ maka afọ. Aga m na ka ị na-ekpebi ma hà ma nke ndị ahụ na-nri ma ọ bụ na-ezighị ezi. ma n'eziokwu, Echeghị m na ha ga-eme ihe dị ukwuu iji lebara ezigbo nsogbu.
The music ndị a rappers hapụ bu nziputa nke obi ha. Okwu anyị na-mgbe a zuru okè foto nke ihe na-aga n'ime anyị. Ndi akanam tripped mgbe ejide a iko mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ? Ihe ọ bụla i ke iko akwafuo pụtara n'elu ala. Ka anyị niile maara, anyị clumsiness-adịghị amị mmiri mmiri, ọ dị na-egosi anyị ihe bụ ihe na iko. Ọ bụ otu ihe ahụ ka okwu a gwara. Mgbe anyị na-ekwu okwu, ma ọ bụ RAP, ọdịnaya nke obi anyị na-awụfu si. Ekwu okwu ma music adịghị eme ka anyị na-eme mmehie, ma ọ dịghị ekpughe ihe bụ ihe na obi anyị na uche (Matthew 12:34).
Na ìhè nke na, -ege ntị ụfọdụ n'ime rappers onye na- okpukpe themes agwa m ihe abụọ.
mbụ, na ha aghọtaghị onye Jizọs bụ. Ọ bụrụ na ha mere, ha agaraghị ekwu nke Ya otú a. N'ezie, ha maara Jizọs bụ onye Juu nwoke ahụ e kpogidere puku afọ abụọ gara aga. ma, ha adịghị n'ezie ịghọta Ya.
Ọ dịghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị nri ha na uche na-agbalị itinye onwe ha na a larịị na zuru achị ma ọ bụrụ na ha n'ezie na-aghọta Ya na-ndị dị otú ahụ. Ọ dịghị onye ga-akparị di ya site na nweko Ya na mmekọahụ rụrụ omume ma ọ bụ ime ihe ike ma ọ bụrụ na ha ghọtara na Ọ bụ ya bụ ndu ebighi-Onyeikpe nke mkpụrụ obi ha. Ha agaghị awụlikwa aha ya ka ọ bụ a dịghị onye na-emeso aha Ya dị otú ahụ na levity na nkwanye ùgwù.
Mgbe ị na-na na na n'ezie hụrụ Jesus, ị na-aghọta na ọ bụ na-enweghị atụ. Mgbe ị na-aghọta n'ezie ihe King, ị na-erubere ya isi, ị na-adịghị aka ya. Ya mere, nanị nkwubi okwu m nwere ike ise bụ na ha ahụbeghị ya maka onye ọ bụ.
Nke abụọ, anyị mkpa ndị maara Jesus okwu ike. Ọ bụghị nanị songs na blog posts, ma na nri abalị, na boardroom, na na klas. Gịnị mere? N'ihi na nke a amaghị na enweghị nsọpụrụ bụ bụghị nanị rappers. Aghara art bụ nanị otu okwu nke ya. Anyị bi a omenala kpuo ìsì ka eziokwu (2 Ndị Kọrịnt 4:4).
Asaghe anya nile kpuru ìsì
Ya mere, ọ bụrụ na ị maara Jesus, -agwa ndị enyi gị na ndị ezinụlọ eziokwu. Chineke na-adịghị na-toyed na. Ọ bụ na-efe ofufe, hụrụ n'anya, rubere isi, ma nwee mmasị. Ọ bụ ezigbo. Ọ kpọrọ asị asị mmehie na zitere Okpara ya ka o gbuo ya. N'ezie, Ọkpara ya nwụrụ ma were nke nmehie otú anyị ga-enweghị ka. Na Chineke mere ka O si n'ili nke mere na anyị nwere ike ịdị ndụ na Ya ruo mgbe ebighị ebi.
Rue a Good News on ndị ọzọ! ma biko, eme ya na-amara. Kwụsị eti na ndị mmadụ, na-amalite ahụ ha n'anya. Ọ bụrụ na ị hụrụ Jizọs maka onye ọ bụ, ọ bụghị n'ihi na ị na-mma karịa onye ọ bụla. Ọ bụ n'ihi na Chineke meghere gị anya nile kpuru ìsì. Kpee ekpere Ọ ga-eme otu ihe ahụ enyi gị na ndị ezinụlọ.
Ma ọ bụrụ na ị na-amaghị Jesus, ị kwesịrị ị na aka ịmata Ya. Ọ bụ indescribably mma, na ihe karịrị nke anyị kwesịrị ekewa. E nwere ihe bụghị otu n'ime anyị nwere ike ileghara Chineke ma ọ bụ na-emeso Ọkpara Ya dị ka nanị ibe Dude. Anyị mgbe ebighị ebi na-adabere na ihe anyị kweere banyere Jizọs. Na eziokwu bụ, ma anyị kwere na Ya ma ọ bụ na, anyị ga-ekpe ikpe site na Ya.
Ya mere, ihe bụ ihe Chineke na-a nonbeliever ị na-ajụ? Onye Okike, -akwado, na Onyeikpe. Ma ọ bụrụ na anyị ga-atụgharị ma kwere - Onye nzoputa.
*Disclaimer: M na ọ bụghị aro na ị na-ege ntị songs kwuru n'elu. Otu n'ime ha e dere okwu rụrụ arụ a na-agaghị abụ ihe kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na-enye aka n'ihi na ọtụtụ.
Abe • August 19, 2013 na 9:55 Abụ • zaghachi
“Anyị ga-niile na-atụ egwu n'ihi na onye gaara gbụsara ọnụ mmiri na ihu nke
president, ma anyị kwesịrị-ọbụna ihe na-atụ egwu n'ihi na onye spits na ihu nke Chineke Pụrụ Ime.” – Na ikpe bụ nnọọ ike!
Daalụ maka isiokwu a Njem! Atọ m ụtọ n'ezie Christian Hip Hop n'ihi na m na mgbe obi na lyrically o nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọdịnaya na-ezi ihe karịa nkịtị CCM otuto music.
eleezie, M mgbe mmasị ego Hip Hop n'ihi nke mgbe nile na-ekwughachi in-a me ọdịnaya nke mmekọahụ, ọgwụ ọjọọ eme ihe, onwe ebuli anyị elu, etc. Na kemgbe eziokwu ọbụna tupu m ghọrọ Christian.
N'ezie, M na-eto na-ege ntị Punk nkume na mgbe niile a rocker. Mgbe m hụrụ Christian Hip Hop, M n'anya ya! Enyi m bụ ndị nyeghị ya ọnụ okwu m na m na-ege ntị Hip Hop kemgbe m mgbe nile kpọrọ asị ọ, dịkarịa ala ego Hip Hop.
Nọgide na-eme gị oké ọrụ na m ga kwa nwanne m nwoke! N'ihi na ebube Chineke na anyị hụrụ n'anya Onye Nzọpụta Jesus! :D
Avery • August 19, 2013 na 9:56 Abụ • zaghachi
CherishJesusLuv • August 20, 2013 na 5:47 Abụ • zaghachi
M na-ekweta na ọ bụ ihe jupụtara mmadụ n'obi ka ọnụ na-ekwu, otú ndammana okwu na songs na-aga na-banyere whats na-aga ke a onye.
M ga-amasị tinye na ọtụtụ Country abụ abụ nke ọma na-ekwu banyere Jizọs dị ka ụfọdụ onye ha ga-aṅụ na? Ummm yeah nri ma ọ bụrụ na ha hụrụ ya, ha ga-aghọ umeala n'obi na ọ gaghị na-eche ọtụtụ ihe banyere mmanya. Ma ọ bụ ga-gbalịa izochi n'ihu ya.
Ga-amasị m ịkọrọ na ebe a na gị na m na-akpọ na-ekwu okwu ka ndị mmadụ banyere Ịhụnanya Ya. Ya Spirit gwara m na ya ga-ekwu okwu tụbara m ndị mmadụ. Na abụghị m zuru okè na m na-agbalị ịnọ unstained site ụwa, na m na-eto eto dị ka Ndị Kraịst ndị ọzọ na-.
M chọrọ ịkọrọ gị ụfọdụ m na-agba akaebe nke Gods ịdị mma na m ndụ.
M mgbe nile chere ka m nwere ike na-eche na Chineke na-ele m ọbụna dị ka a na-eto eto. M ga-abụ abụ Ya na-ina furu ụbọchị na-eche echiche banyere ịhụnanya Ya. Mgbe m bụ 15 Chineke n'ụzọ nkịtị na-asa m na ịhụnanya Ya na Mmụọ Nsọ na m natara Mmụọ Nsọ na ụbọchị. My ọnụ e ji site na Mọ Nsọ na-aza ajụjụ ahụ bụ na ndị ọzọ n'ime ụlọ obi. Ọ gwara m okwu tụbara obi m na-agwa m Ọ bịara na-ebi m na ya ga-echebe m na-ekwu tụbara m mgbe oge ziri ezi. M na-echeta mgbe m nọ 9 ọkwa na ndị a ndị mmadụ wee na ahịhịa Mkpọ full condom anyị akwụkwọ. Robert E. Lee na Tyler TX. Ha gosiri anyị ọtụtụ foto na deceases na mmekọahụ ga-eme ka. Ha gwara anyị ka anyị jupụta free jupụta elu obere aja aja ahịhịa akpa condom na-ewe ha ma ọ bụrụ na ha dị anyị mkpa. Ha na-agwa anyị na anyị nwere ike ịga ndị nọọsụ ụlọ ọrụ na-enweta ụfọdụ na-ọ bụrụ na anyị na-achọ ime ha nri mgbe. Mgbe ha sịrị na,”Mmekọahụ bụ ihe kasị mma ndochi na ị ga-jupụta.” M guzoro ọtọ-n'ihu dum 9 ọkwa na klas na ndị a ndị mmadụ na-ekwusa. “Ọ dịghị mmụọ nsọ Chineke bụ ihe kasị mma ị na m ga-jupụta.” Ha nwere uwe ojii duruo m ọrụ n'ọfịs ruo mgbe ha mechara e ikwafu. M na-echeta a ole na ole ụmụ akwụkwọ guzo tinyere m, sị ọ bụ nri. Nke a bụ mmalite nke m njem.
Mgbe e mesịrị na na Life m nọ na ulo ebe e aṅụ na kaadị egwuregwu. M na-echeta m dị ka m na ọ dị mkpa ka na-agba ọsọ a nke a mmetụta na-erikpu m na obi m. M hụrụ otu nwoke na a karaoke machine malitere ịsị m aha ma kwuo ihe banyere m na m na-amaghị otú ọ pụrụ ịmata. M na-ele ya na chọpụtara na m nwere ike ịhụ na mpi-apụta n'isi-ya, m jụrụ enyi ma ọ bụrụ na ọ nwere ike na-ahụ ihe na-eme na-, ọ zaghachiri, sị dịghị, ma na ọ na-erughị ala banyere anyị na-e. M maara na m nọ na-ahụ a ime mmụọ ihe na-eme mgbe ahụ. M hụrụ ndị ọzọ ihe aguba nkọ ezé na na claws, na na mgbe ahụ m efehe aka n'ọnụ ụzọ esi. The nwoke na karaoke machine kpọkuo a inyom na imechi ọnụ ụzọ na m na ka m ghara ịhapụ, ọ bụghị ike na ọ nēme ngwa ụzọ guzo-n'ihu ọnụ ụzọ na-emechi m n'ime. M nọ na-ezu ujo na ihe ọzọ merenụ,. M hụrụ ugliest demon kwere omume-abịa ọkara ụzọ nke nwoke a dị ka ma ọ bụrụ na ọ ga-eripịa m nri e, na na oge a mara mma na-acha ọcha-nkpuchi gbadata m dum na ntabi mmụọ ọjọọ ama a Mans ahụ. The nwoke ike iguzo na adara ala ụzọ n'ime a nọ ọdụ ọnọdụ na m hụrụ anya mmiri na-agba ọsọ ya iru. M bụ mgbe ahụ ike na-emeghe ọnụ ụzọ ọbụna na nwoke a nọ ọdụ na-n'ihu dị mfe dị ka ọ bụrụ na ọ na-adịghị ọdụ n'ebe, na malitere na-agba ọsọ dị ka ngwa ngwa dị ka m nwere ike na nke a na ulo mgbagwoju.
M n'ebe a dị m ka ọ bụrụ na m chọrọ na-agba ịnyịnya m onwe n'ọnụ mmadụ niile ná ndụ m nke ga-eche echiche na-etinye m n'ime ime ụlọ ya na ndi ya na ha demon ji. N'ihi ya, m lụrụ ọgụ ụzọ m n'ebe òtù ndị omempụ na ọjọọ. M n'ezie na-enye ndụ m nile Chineke n'ebe a na ga-amasị tinye m ka na ọzụzụ a na mpaghara na-. Ma ka Chineke chebe m na otú a n'agbanyeghị na m nọ na-eto eto na na mkpa nke ukwuu ebere nakwa amara, ka baffles uche m na nke a ụbọchị. Ịhụnanya ya bụ Amazing. M na-okosobode onye ọzọ ndị mmụọ ọjọọ na mmụọ nke m ike n'ụzọ ime mmụọ ahụ. M na-akwọ ụgbọala ala hwy 155 na m chọpụtara na a ụgbọ ala efere na kwuru “vampire” na ya, dị ka m na-agafe ụgbọala m anya na onye na-akwọ na hụrụ a demon nri n'ebe ahụ Mans ahụ. M ọsọ na-na ala n'okporo ụzọ n'ebe a otu.
Ihe atụ ọzọ nke Chineke Protection ná ndụ m. Mgbe m dị obere oge ụfọdụ mgbe m natara Mọ Nsọ m nọ n'elu ya na azụ ọgwụgwụ nke a bulie ụgbọala na Louisiana na ọ bụ m na atọ na ụmụ nwanne mama niile dị obere na azụ na atọ nwanne mama ke n'ihu. M chere na Mọ Nsọ ka m na-abụ abụ O nwere ụwa dum ke aka ya, Na m guzoro na-akpọlite ​​m aka Chineke. N'oge ahụ dị ka ụmụ nwanne mama m na azụ na-na-achọ na m na-amasị ya mere na-ọ na-abụ abụ na, nwa nwanne nna m bụ onye na-akwọ ụgbọala na-agafe a ụgbọala anyị ziri ezi na anyị na-na a usoro na a ụgbọala bụ na uzo n'ihu na-abịa n'ihu. Nwa nwanne nna m bụ onye na-akwọ ụgbọala si, “Ezigbo Chineke ihe m mere.” na m ọzọ na nwa nwanne nna n'ihu kwuru, “Chukwu m.” na m nọ nnọọ na-eweli aka m Chineke na-abụ abụ. M hụrụ a mara mma mmiri ozuzo-kpọ isi n'aka ịsụ na ịgba ọhịa ígwé ojii gbadata ntabi na-ewepụ ndị ụgbọala na gaba na ikukota na anyị. M echeta ịhụ na gwongworo n'azụ anyị na ala n'okporo ụzọ dị ka ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe merenụ. Mgbe anyị nwetara azụ nwanne mama m n'ụlọ nwanne papa m kwuru, “Anyị ga-niile nwụrụ anwụ ma ọ bụrụ na adịghị nwere kpọrọ ihe kemgbe na ụgbọala.” ha jụrụ m ihe m na-eme azụ e na m kwuru na-abụ abụ Ọ na nwetara ụwa dum ke aka ya. My ụmụ nwanne mama m ka nọ Meekwa nke Chineke maka nchebe ya nke anyị niile na ụbọchị. M gwara ha na ọ bụ “m” ma “Chineke” emi ekekpemede anyị.
Nke a bụ nnọọ a di na nwunye nke ọtụtụ ugboro Chineke chebere m, gosiri ebere ka m wee na-m si nsogbu.
Na niile na sịrị na m anya na a na-agba ume onye si n'ebe, Na-ahụ n'Anya Jesus bụghị naanị banyere “ịhụ” ihe-eme maka na anyị maara Akwụkwọ Nsọ kwuru Ngọzi nādiri nwoke onye na-ahụghị ma ka na-na-ekwere. Na nke ahụ bụ nanị otu akụkụ nke Akwụkwọ Nsọ FYI. Ko m chọrọ ịkọrọ nke a na-asị na m n'Anya Jesus, M kwere na-agba akaebe na nchebe ya,ebere, na Ịhụnanya. M chọrọ ka mmadụ niile mata Eze anyị nwere a oriri agbamakwụkwọ Ọ na-akwadebe maka ya ọ hụrụ n'anya. Anyị dị ka onye Ya Church bụ ya ọ hụrụ n'anya na Ọ chọrọ ka ị na m na onye ọ bụla na-agụ nke a dozie onwe ha maka ya pụtara, na-echegharị si n'ebe mmehie na-eso Ya. M unu n'anya music Njem. Ọ gọzie ndụ m na ndị ọzọ gbara m gburugburu. M ekpe ekpere na ị ga-anọgide na-Tinye Matt 6:33 n'ime omume na-ebi ndụ a ndụ na-agba akaebe na anyị Eze ịdị mma. M na-ekele maka ezi gafere na Chineke na-ahụ n'anya kwuru na m na m na-eto eto na ezinụlọ nwere ike na-enwe dị ka anyị na-echere Ya. elekọta :) ABỤ M UNASHAMED!
Matthew 6:33 Ma unu nāchọ alaeze nke Chineke, na ezi omume ya; na ihe a niile dị ka a ga-atụkwasịkwara unu.
ọcha MIMSHACH • August 19, 2013 na 9:57 Abụ • zaghachi
Ekwu okwu banyere nke a rapper . O nwere a “Jizọs na-ejegharị” ọhụụ na Hip-iwuli elu ụlọ ọrụ dị ka i nwere ma ihe mere? “okpu” ma ọ bụrụ na gị na-ekwu okwu. Gịnị gahiere?…Ndị a bụ ajụjụ dị mkpa ka ị chọta azịza.
Ịnọdụ azụ na-enyocha ihe na-eme Jesus “image” wont ịgbanwe a ihe. Dị ka a okwu nke eziokwu ahụ bụ na cant igbanwe Jesus’ JESUS!!.
A kpogidere Ya n'obe site ụfọdụ ụyọkọ ọnụ ala Ndị Rom agha na na ọbụna ada ka na-egosi na ọ na Jizọs bụ Chineke mgbe Ọ ịkpọlite.
Gaa na a ndekọ ihe n'aka YMCMB na Kwusaa Eziokwu a raw n'ụzọ, lee ma ị ga-adị ndụ dị ka a rapper.”kwuo ihe ụwa chọrọ ịnụ” azụmahịa…smh
Ha na-otú na-eji ụwa na ya na usoro: inweta ego, fornicating, wdg. na ịgbatị na ọbụna ma ọ bụrụ na Jizọs si egosipụta onwe Ya ahụ ka ha taa, ha ga-amaghị ama ileghara azụ n'ime e ochie ụzọ mgbe e mesịrị.
“Ị nwere ike mfe ime a osisi na ya-enye nwa ara na ogbo ma ọ bụghị mgbe ọ guzosie ike dika a osisi.” na nanị ụzọ tufuo a osisi kpamkpam bụ site n'ibibi ya mgbọrọgwụ.
Mere, mee ihe i kwesịrị ime iji bibie ihe na-akpata nsogbu dị ka a “zọpụta” ịbụ. Gwa ụwa ihe ha na-na na-anụghị tupu.. A ihe akaebe nke Jesus’ Biri n'Ụwa, Ike na ebube “ọhụrụ ìhè”
Nicholas J. Gausling • August 19, 2013 na 9:58 Abụ • zaghachi
Ụfọdụ ndị enyi m na-adịbeghị anya kwuru na ụzọ kasị mma isi na-aghọta ụgha bụ site n'ịmụta na-aghọta eziokwu; M na-eche na amamihe na-emetụta ebe a. Otu nwere ike na-aga banyere eke a nkuzi megide a esite-music, ma ọbụna mma bụ ịnọgide na-amị Chineke na-eche nanị music.
M ukwuu nke a RAP akwado onwe m, ma m tremendously ụtọ na e nwere ndị dị otú ahụ dị ka onwe gị na-eje ozi dị ka a ụdị nke ụmụ amaala ozi ala ọzọ na-eru n'ime na ọdịbendị na ịhụnanya nke Kraịst.
Avery • August 19, 2013 na 9:58 Abụ • zaghachi
ihe dị egwu, ọma na-eche eche perspecitve si Njem Lee!
Kathy • August 19, 2013 na 9:59 Abụ • zaghachi
Mara mma na ike si! Daalụ maka na-ezisa eziokwu!
ọcha MIMSHACH • August 19, 2013 na 9:59 Abụ • zaghachi
Ọ DỊ MMA. ọ bụ oge maka “Christian rappers” mee ya ihe ọchị ha (ụwa) chi(Setan). ya dị mfe dị ka na.
Ọ bụrụ na ị na-eche anyị Jesus a na-lelịa / akwa emo mgbe ahụ ị rappers nọ n'ọnọdụ kasị mma na-na-ekpe ha na satan enweghị ike site mkparị / akparị Setan n'ụzọ siri ike ugboro abụọ.
Dr. ojii Utley • August 19, 2013 na 10:00 Abụ • zaghachi
Na m akwụkwọ RAP na Religion: Ịghọta Gangstas Chineke, M dee banyere otú rappers-ahụ onwe ha dị ka Jizọs n'ihi na ọ na-emegbu emegbu ka ha. Lelee. http://rapandreligion.com
Cece • October 31, 2013 na 8:38 pm • zaghachi
Ee! Daalụ maka na-ekere òkè Dr. Utley! M nụrụ ị na-asụ na North Park University ikpeazụ ọdịda na e mmetụta site na nke a na njikọ.
Terence Abraham • August 19, 2013 na 10:00 Abụ • zaghachi
Chaị ga…..M na-eme na-aghọta otú dị ike na subtly ị na-eji okwu na-etinye site na gị echiche [egosi whats gị iko :) ]…M chọrọ na-ekwusi okwu yiri echiche, n'ezie na unu me doo anya n'ime isiokwu a na-eji ezi ihe nlereanya.
MoNsTroSity • August 19, 2013 na 10:00 Abụ • zaghachi
enwe chi ỌTỤTỤ na isi ỌTỤTỤ. (1Co8:5) aHaYah Asha aHaYAH, Sịnụ ỤMỤAKA nke Israel ABUM ezitewom ị. (Ex.3:14) & Ọzọ kwa, ndi El nke Abraham, Yitschak, n Yaacov (Ex.3:15).. YmmanuwEL, Isaiah Hmshiyc.
ekpe ekpere & na-agụ gị Bible oké na Onye Nsọ nke Israel wil ekpughe azịza site n'aka nna anyị nke nkà na heaven… Nzọpụta na Onye-nzọpụta na-comin azụ maka ya ppl… “Ebo iri na abụọ nke Israel” & ndị na KWEERE okwu aHaYAH.. ịchọ Yesha – Nzọpụta dị ka akụ zoro ezo… gọzie aHaYAH – Ọ bụ onye a, Ọ bụ onye na-, & Ọ bụ onye na-abịa. (Rev1:4) ọbụna otú abịa, YesHaYAH. Amen.
RJSALEZ • August 19, 2013 na 10:01 Abụ • zaghachi
Ya mere, ihe bụ ihe Chineke na-a nonbeliever ị na-ajụ? M na-ekwu na-ajụ ha azụ, Gịnị bụ a na-abụghị onye kwere ekwe na a Chineke? ;)
Eze Nwanyị Ukwu • August 19, 2013 na 10:02 Abụ • zaghachi
na nke a bụ n'ezie oké ozi
sitere n'ike mmụọ m ka m dee ihe taa, ekwela ka ụfọdụ na-adịghị mma ndị mmadụ ma ọ bụ kwuru achịkwa gị n'ikwu eziokwu. M maara na e nwere ụfọdụ si n'ebe na ike na-agbalị iji nweta gị iwe. M ebe a na-ekwu Jide ka ị na-eme ka a dị iche
MsB • August 19, 2013 na 9:54 pm • zaghachi
Mgbe m bụ ma ọ bụrụ na ụwa, M bụ a arọ hip iwuli elu enthusiast n'ihi nka creativity na tumadi n'ihi nke ọdịnaya. Ntị adaba ka okwu na-amasị obi. Ya mere,, na kachasi mkpa, dị ebe ọ na-agba ọchịchịrị obi, a ga-enwe ndị na adaba na ozi. Isiokwu a na-dị nnọọ na-eje ozi mara na anyị bụ ndị kweere n'ihi “anyị na-mere ka ìhè ya a obodo na a hilltop” na na anyị chọrọ ka ndị mmadụ 'kụrụ anyị mgbe ha na-eche furu efu’ Ya mere na anyị nwere ike ịnyagharịa ha ụzọ n'ụzọ iri nzọpụta. Ị na-na na depụtara anyị naanị ozi ke ibuotikọ emi- thanx! P.S. N'ANYA iko ntụnyere!!!! egwu. Chukwu gozie
aha: Rebel rapper Njem Lee Mkparita About RAP & Religion - EE FM
UnveilDa1 • August 20, 2013 na 1:32 pm • zaghachi
M hụrụ n'anya echiche usoro nke Mr. Lee, M na na na a na-eso ụzọ nke Njem site na-awụlikwa elu, Mgbe ọ jụrụ ajụjụ “Ya mere, olee otú m ga-azaghachi? M nwere ike na-amalite a mkpọsa boycott ha music. ma ọ bụ, dị ka a rapper onwe m, M nwere ike ide a Scathing diss ndekọ maka afọ. M ga-ekwe ka ị na-ekpebi ma ma nke ndị na-eru nso na-nri ma ọ bụ na-ezighị ezi.” M na-eche a nzaghachi na a diss ndekọ bụ nnọọ ihe kwesịrị ekwesị, M na-ahụ ya dị ka ohere ime kpọmkwem ihe Devid mere Golaịat. Ọ nwere ohere iji mechie ọnụ nke onye na-ekwu okwu megide ya CHINEKE. Ugbu a na mmetụta na ịtụnanya CHINEKE enye talent Njem nwere, M na-ahụ ya dị ka a ọlaedo ohere Mesa na Industry.
Sasha • August 21, 2013 na 4:15 pm • zaghachi
Ka Chineke gọzie- Good Blog!
keron • August 27, 2013 na 3:34 pm • zaghachi
AKWA njem na-eto Chineke!!!!!!